Nanivana ny vidiny voafaritra ao amin'ny OnePlus 6 tamin'ny fandefasana | Androidsis
Nanivana ny vidin'ny kinova roa amin'ny OnePlus 6
Nandritra ny herinandro maro dia tsy nijanona ny fahatongavan'ny vaovao momba ny OnePlus 6. Ny sainam-pirenena vaovao an'ny marika sinoa dia iray amin'ireo telefaona andrasana indrindra tato anatin'ny volana. Soa ihany fa efa fohy dia fohy ny fiandrasana. Hatramin'ny andro vitsivitsy dia haseho amin'ny fomba ofisialy any Londres. Amin'izay fotoana izay no ahafahantsika manamarina raha marina avokoa ireo fivoahana rehetra ireo.
Raha miresaka fivoahana dia anjaran'ny vaovao izao. Izy io koa dia famoahana lehibe. Satria efa voasivana ny vidin'ny kinova roa amin'ity OnePlus 6 ity. Iray amin'ireo lafiny mbola tsy fantatra momba ny telefaona.
Betsaka ny vinavinany momba ny vidin'ny fitaovana. Satria nanipika ny haino aman-jery sasany fa lafo be io maodely io. Zavatra izay tsy isalasalana fa niteraka fisalasalana sy tahotra teo amin'ireo mpampiasa. Satria ny finday marika sinoa dia niavaka tamin'ny fananana vidiny ambany noho ny mpifaninana aminy.
Farany, manana ny vidin'ny OnePlus 6 eo amintsika izahay, ary manana vaovao tsara. Satria tsy hisy fiakaran'ny vidiny lehibe. Na dia somary mitombo kely aza ny vidiny, dia mitoetra ho mitovy amin'ny an'ny finday taloha an'ny marika ihany izy ireo. Ka nahatanteraka izany izy ireo. Ireto ny vidin'ny OnePlus 6:
Kinova finday 64GB: 519 euro
OnePlus 6 miaraka amin'ny fitehirizana anatiny 128 GB: 569 euro
Ka hitantsika fa tsy nisy fanovana be loatra raha oharina amin'ny OnePlus 5T, satria ny vidin'ny maodely teo aloha dia 499 sy 559 euro. Noho izany, hitantsika fa kely ny fahasamihafana. Ka ny finday dia hitohy ho mora kokoa noho ny mpifaninana aminy maro.
Vaovao tsara, satria ny vidiny dia iray amin'ireo tanjaky ny telefaona OnePlus hatrany. Zavatra hita taratra amin'ity modely ity koa azo antoka fa hanampy azy hivarotra tsara eny an-tsena mandritra ny volana vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Nanivana ny vidin'ny kinova roa amin'ny OnePlus 6
Efa fantatray izay telefaona Xiaomi hanomboka eny an-tsena amin'ity taona 2018 ity
Xiaomi notorian'i Coolpad noho ny fandikana ny patanty